Amazon Kindle Paperwhite 2015 famerenana: ny sharpest ary mbola tsara indrindra - News Fitsipika
Amazon Kindle Paperwhite 2015 famerenana: ny sharpest ary mbola tsara indrindra
Ny vaovao Paperwhite Kindle ny tsara indrindra no Amazon mbola. ny fahazavana, mora ny mihazona sy mampiasa, raha ny lamba fanakonana iray amin'ireo crispest e-taratasy efijery Efa hitako. Mahatonga mamaky ny fahafinaretana sy namaky ny ela kokoa noho ny ara-dalàna tiako.
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Amazon Kindle Paperwhite 2015 famerenana: ny sharpest ary mbola tsara indrindra” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Talata 23 Jona 2015 06.00 UTC
Amazon Kindle ny farany dia nohavaozina dikan-ny Paperwhite, ankehitriny amin'ny crisper, ary mora kokoa ny mamaky lamba amin'ny avo roa heny ny isan'ny pixel.
Ny Paperwhite no midrange Kindle, ambany ny ambony-ny-ny-tsipika £ 170 Voyage izay mampanantena lakolosy rehetra sy ny sifflet, ary mihoatra noho ny £ 50 fototra Kindle. Fa efa Amazon nihinana tao an-Voyage ny tombontsoa amin'ny fanomezana ny vaovao ihany Paperwhite ny vahaolana e-taratasy toy ny lamba flagship?
Simple monochromatic famolavolana
Ny backlight mahatonga ny e-taratasy mijery lamba fotsy ary Adjustable amin'ny alalan'ny 24 ambaratonga. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Avy any ivelany fa sarotra ny mahita inona no niova. Tena mitovy efijery-mifantoka famolavolana. Ny indray dia miafina ao amin'ny malemilemy-mikasika plastika, ny anoloana bezel dia mafy kokoa sy kely kokoa noho ny teo aloha fotsy taranaka.
Tsy misy bokotra ankoatra ny fahefana ny bokotra eo ambany amoron'ny - ny touchscreen mikarakara ny sisa. Swipe na mikasika ny ilany ankavanana, mba hiala ny pejy, ny ankavia hiverina. Aza mikasika ambony ka mangataka ny sakafo sy ny fanovana toe-javatra, manitsy ny backlight na misafidy boky vaovao.
Raha toa ianao ka mbola nampiasa ny Kindle na hafa e-mpamaky izany dia ho avy hatrany ny mahazatra.
Ny 6in lamba io no ivon'ny. Manana avo roa heny ny isan'ny pixel sy ny lamba fanakonana hakitroky ny 88 bebe kokoa isaky ny santimetatra teboka (PPI) noho ny teo aloha Paperwhite taranaka amin'ny 300PPI, izay voamarika rehefa mamaky lahatsoratra. Fa fampitahana ny mora indrindra £ 49 Kindle niaritra manana 6in lamba amin'ny 167PPI, izay miharihary aza tsy mazava.
Related: The Guardian sy Observer dia izao azo jerena ao amin'ny Kindle
Ny hazavana anoloan'ny mahatonga ny pejy hiseho fotsy, izay misy ny anarany avy, ary azo tanana ahitsy amin'ny tena tena mamirapiratra ny tena pahina noho ny namaky tao amin'ny maizina. Ny backlight dia na dia manerana ny pejy, fa ny tena faran'ny kely toa ny pejy grayer.
Izany no tsara indrindra hatramin'izay lamba manify ny Paperwhite, ary raha mifanaraka ny lafo indrindra Kindle, ny £ 170 Voyage, amin'ny Pixel ataovy ho tsy tena toy ny kalitao avo.
Screen: 6amin'ny e-taratasy (300ppi)
Weight: 205h (3G dikan 217g)
Fifandraisana: Wifi (3G tsy voatery)
Battery fiainana: naoty ho an'ny eo ho eo 21 ora ny famakiana
New endritsoratra sy ny endri-javatra
Ny Bookerly endri-tsoratra dia natao mba ho mora kokoa ny mamaky on-efijery. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Amazon Manana endri-tsoratra vaovao noho ny mampirehitra antsoina hoe Bookerly, izay natao noho ny mamaky ny lamba, fa tsy ny zavatra vita pirinty, ary typesetting vaovao endri-javatra. Mitambatra Manao mamaky amin'ny efijery mora kokoa noho ny fampiasana Classics toy ny Helvetica. Nahita maso-aretina dia tsy olana, na dia nandritra ny fotoam-pivoriana famakiana ela - dia ho ahy mamaky eo amin'ny lamba eo amin'ny smartphone, na tablette.
Amazon ny X-ray, notations, teny fijery-up sy ny fandrosoana tondro, izay milaza aminareo fa tena intsony dia handray anareo mba hamitana ny toko, hametraka lanjany rehetra sy mahaliana ny famakiana traikefa.
Hanao rantsan amin'ny teny na anarana sy ny vanim-potoana vaovao saro-pady boaty tampoka, izay ilaina indrindra ho an'ny nohafohezina teny, fanafohezan-teny na ny tarehin-tsoratra no nihazona izany andraikitra izany nanadino ny momba.
Haingana ary maharitra 21 ora
Adinoy ny toetra amam-panahy? Ny X-ray endri-javatra mahatonga azy mora ny haharaka ny iza no iza. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny vaovao ihany koa Paperwhite kely haingana kokoa raha manaiky fikarohana ny interface tsara noho ny teo aloha taranaka. Tsy mpifaninana ny Premium takelaka, fa mahatsapa snappy ho e-mpamaky.
Ny Paperwhite milanja 205g, dia 9.1mm matevina ary mora ny mihazona amin'ny tanana iray. Mamadika ny pejy miaraka amin'ny touchscreen dia mora amin'ny tanana roa, tsy mba toy izany ny iray - bokotra eo ankavanana- ary mbola nisy sisa-tanana sisin'ny ho an'ny pejy fiovana ho tsara.
Amazon milaza ny Paperwhite maharitra mandritra ny iray volana sy tapany mamaky 30 minitra isan'andro (21 ora in tanteraka) miaraka amin'ny famirapiratana teo amin'ny 10 avy amin'ny 24 ambaratonga. Izay tapa-bolana latsaka noho ny teo aloha ihany Paperwhite miaraka amin'ny toe-javatra, but easily long enough to finish a book or two.
The black soft-touch back is easy to grip but picks up dust. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
A version with 3G is also available costing £169.99, while removing the ads costs £10. It is currently available for pre-order shipping on 30 Jona.
Mahatsara: lehibe efijery, easy to use, look-up and X-ray features are great, even backlight, large range of accessories, extensive book store
Maharatsy ny mifampiresaka: relatively expensive for a single-use device, no automatic adjustments of the backlight, no page turn buttons
Words, acronyms, abbreviations and footnotes are all accessed by just holding a finger over the letters. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
• Tesco Hudl 2 famerenana: be dia be ny takelaka ho an'ny vola
• Apple iPad mini 3 famerenana: a touch more of the same
• Samsung Galaxy Tab S famerenana: a rival for the iPad?
Tsarovy ny mindfulness: zava-mahadomelina tsy ...
Amazon.com, Article, E-readers, Gadgets, Kindle, Famerenana, Samuel Gibbs, Teknolojia
← I ny Nokia 3210 ny lehibe indrindra telefaonina fotoana rehetra? Parkinson ny zava-mahadomelina sy ny fahaketrahana dia afaka manova ny fitondran-tena ny fitsarana, fianarana mampiseho →